FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA YORKIE RUSSELL - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Yorkie Russell
Alika mpihetsiketsika mifangaro i Yorkshire Terrier / Jack Russell Terrier
Bo the Yorkie Russell (Yorkie / Jack Russell mix dog) amin'ny 2 taona rehetra nivelatra teo am-pandriana
Ny Yorkie Russell dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Yorkshire Terrier ary ny Jack Russell Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Baxter Ricky Bobby Bromstrup ny Yorkie Russell amin'ny faha-5 taonany— 'Baxter dia Yorkie / Russell 5 taona. Milanja 20 lbs izy. Izy irery no alika mamy, hendry indrindra ary mahatoky indrindra hatrizay nahalalako nahafantatra. Tena hybrid lehibe ity. Izy irery no kintana amin'ny fampisehoana ao an-trano. Miaraka amin'ny alika sy saka rehetra izy ary tia milalao fakana, mandeha mitsangatsangana ary mitaingina ny fiara! Tsy haiko intsony izay holazaina. Mahatalanjona tanteraka izy. Misaotra anao nihaona taminy. '
Baxter Ricky Bobby Bromstrup ny Yorkie Russell amin'ny faha-5 taonany
alika wiener mainty sy volontany
Pippin the Yorkie Russell puppy at 10 herinandro with his littermates — their mom is a Yorkie and dad a Jack Russell. 'Pippin dia tena mavitrika tokoa, nefa koa tena be fitiavana. Tiany ny saina ary miondrika be dia be izy, toy ny Yorkie) Tia olona vaovao koa izy ary mieritreritra fa azy ny hilalao ny zava-drehetra. Kely ny fandevenana. Manana saka tokoa izahay ary Pippin dia tia milalao miaraka aminy, saingy saro-piaro kosa ianao rehefa manintona ny saka ianao. Nimamoy mihitsy aza izy rehefa mahita ahy mivady mizara oroka na fifamihinana ary tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny fifangaroana foana!
Harvey the Yorkie Russell amin'ny 6 volana
Harvey the Yorkie Russell amin'ny faha-6 taonany milalao amin'ny lanezy
Harvey the Yorkie Russell amin'ny faha-6 taonany mijery ny saka saka
Mikorisa (eo aloha) miaraka amin'i Ponca mpiray fako aminy (izy ireo) - izy roa dia samy mifangaro Jack Russell / Yorkie.
Kitiho ny hazo fijalian'i Jack Russell / Yorkie (Yorkie Russell) eo amin'ny 6 volana eo ho eo— 'Squirt dia alika be fitiavana. Manaraka ny reniny izy (a Jack Russell ) hatraiza hatraiza ary mivovo be toa ny dadany izy (ny Yorkie ). TENA kely dia kely izy, izay azony tamin'ny dadany. Ireo mpiray fako aminy telo hafa dia lehibe lavitra noho izy. Tiany ny manoroka ary tiany ny mihady. '
sary an'ny bulldog anglisy taloha
Ponca ny lakroa Jack Russell / Yorkie (Yorkie Russell) amin'ny 10 volana
Jereo ohatra hafa amin'ny Yorkie Russell
Yorkie Russell Sary 1
alika kely mamahana tavoahangy mandritra ny 3 herinandro
mifangaro chiuaua sy rat terrier
corgi jack russell mix alika kely
picture of Cocker spaniel alika